Fa maninona no manafatra entana avy any aminay? - MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTD
Ny tahiry ambongadiny tsara indrindra
Ny tahiry ambongadiny tsara indrindra Amin'ny maha-orinasa ambongadiny eran-tany, manome entana maherin'ny 100000 mahery sy vokatra marika izahay, amin'ny vidin'ny ambongadiny. Hiaina tolotra matihanina sy vokatra kalitao vita any Shina ankehitriny.
Mora ny manafatra
Mandefasa fanadihadiana, ny varotra ataontsika dia hifandray aminao avy hatrany ary hanome anao serivisy ho an'ny marary sy sariaka. Manaiky safidy PayPal azo antoka izahay. Manaiky ny fandoavam-bola amin'ny Bank Transfer sy Western Union koa izahay. Manomboha anio!
Mampiasa DHL, FEDEX, UPS ary EMS izahay handefasana ireo fonosana kely anay. Manomboka amin'ny hadilan'ny MOLONG TATTOO SUPPLY ka hatrany amin'ny toerana lehibe any Amerika Avaratra, Eropa, Azia ary Aostralia, dia mandany 3 ka hatramin'ny 7 andro fiasana ihany ny fandefasana. Amin'ny alàlan'ny Air and by Sea dia misy ihany koa!
Azo antoka amin'ny baiko
Ny filaminana no laharam-pahamehana indrindra amin'ny MOLONG TATTOO SUPPLY. Izahay dia miantoka ny fiarovana ny tahiry fifanakalozana rehetra. Miezaka ny tratry ny herinay izahay mba hampandeha tsara ny entanao amin'ny fotoana mety. Izahay dia manafina ny mombamomba ny mividy. Manafatra filaminana aminay!